News - Fahmitaanka Tijaabada Xakamaynta Milixda
Fahmitaanka Tijaabada Xakamaynta Milixda
Fasaadku waa burburka ama xumaanta qalabka ama hantidooda ay keeneen deegaanka.
1. Burburka badankiisu wuxuu dhacaa sababtoo ah guryaha gaarka ah ee ku jira bay'ada. Jawigu wuxuu ka kooban yahay qaybo wax gumaada iyo arrimo waxyeelleeya sida oksijiinka, huurka, isbeddelka heerkulka iyo wasakhda.
Habka baaritaanka daxalka ku buufinta milixda waa dhaqan la jaangooyay oo si ballaaran loogu isticmaalay warshado kala duwan. Buufinta milixda ee halkan lagu xusay waxay loola jeedaa jawiga si dabiici ah loo abuuray ee chloride. Qeybteeda ugu weyn ee wax baabi'isa waa cusbada chloride sida tan laga helo sodium chloride, taas oo ka timaadda badda iyo aagagga cusbada-alkali.
Daxalka ku dhaca dusha sare ee birta waa natiijada falcelinta korantada ee u dhaxeysa ion chloride ee ku jirta lakabka oksaydhka dusha sare ee birta iyo lakabka difaaca iyo biraha gudaha. Isla mar ahaantaana, ion-ka chloride waxay ku jiraan qadar cayiman oo tamar fuuq ah, kaas oo si sahal ah u nuugi kara daloolada iyo dildilaaca dusha sare ee birta si ay u barakiciyaan iyo / ama u beddelaan oksijiinta ku jirta lakabka koloriin ku jirta, una beddelaysa oksaydhyada aan milmi karin ee loo yaqaan 'chloride soluble', iyo u rogaya dusha sare ee laamiga ah dusha firfircoon. Ujeedada tijaabadani waa in la fahmo inta ay sheyga laftiisu u adkeysan karo falcelintan xun inta lagu jiro isticmaalka guud.
2. Tijaabada sunta lagu buufiyo cusbada iyo codsiyada dunida dhabta ah
Tijaabada buufinta milixda waa tijaabada deegaanka oo ugu horreyn adeegsata xaaladaha deegaanka ee lagu buufiyo milixda si dabiici ah si loogu qiimeeyo caabbinta daxalka ee alaabada ama qalabka birta.
Waxay u qaybsan tahay laba qaybood; mid waa tijaabada soo-gaadhista deegaanka dabiiciga ah, midda kalena waa is-dardargelinta tijaabada bay'ada buufin ee jawiga. Tijaabada macmalka ah ee jawiga lagu buufiyo milixdu waxay isticmaashaa qolka baaritaanka milixda lagu buufiyo si loo qiimeeyo awooda sheyga ee iska caabinta daxalka.
Marka la barbardhigo guryaha guud ahaan laga helo deegaanka dabiiciga ah, uruurinta koloriin ku jirta buufinta milixda waxay noqon kartaa dhowr ilaa laba jeer ka sarreysa. Tani waxay si weyn u dedejineysaa heerka daxalka. Tusaale ahaan, haddii muunad sheybaar lagu baaro jawiga soo-gaadhista dabiiciga ah, waxay qaadan kartaa ilaa hal sano in la xoqo, halka qaab farsameysan loo ekeysiiyey ay soo saari karto saameyn la mid ah 24 saacadood oo keliya.
Imtixaanada lagu buufiyey cusbada macmalka ah ee macmalka ah waxaa ka mid ah baaritaanka lagu buufiyo milixda oo dhexdhexaad ah, tijaabada lagu buufiyo cusbada aashitada asiidhka ah, cusbada macdanta ah ee lagu buufiyo cusbada aashitada, iyo tijaabada buufinta cusbada.
A. Tijaabada buufinta milixda ee dhexdhexaadka ah (baaritaanka NSS) waa mid ka mid ah hababka ugu faca weyn ee loo baaro baaritaanka daxalka oo wuxuu ku raaxeysanayaa dalabka ugu ballaaran. Waxay isticmaashaa 5% sodium chloride salt salt aqueous, oo leh qiime pH oo lagu hagaajiyay heerka dhexdhexaadka ah (6-7). Heerkulka baaritaanka waa 35 ℃, iyo heerka hoos u dhigida buufinta milixda waa inuu u dhexeeyaa 1 ～ 2ml / 80cm².h.
B. Baadhista buufinta cusbada ee asiidhka (ASS test) waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu saleynayo baaritaanka buufiska milixda ee dhexdhexaadka ah. Waxay ku dareysaa xoogaa acid acetic acid ah 5% sodium chloride xal si loo yareeyo qiimaha pH ee xalka ilaa 3. Marka sidaas la samaynayo xalka wuxuu noqdaa aashito, ceeryaanta milixda ee sameysana waxay ka soo baxdaa ceeryaanta milixda ee dhexdhexaad ah. Qiyaasta daxalka ayaa qiyaastii 3 jeer ka dhakhso badan tijaabada NSS.
C. Milixda macdanta ah ee la dedejiyey tijaabada buufinta cusbada ee aashitada (baaritaanka CASS) waa tijaabo deg deg ah oo lagu buufiyo milix cusb oo dhowaan lagu sameeyay dibedda. Heerkulka baaritaanka waa 50 ℃. Qadar yar oo ah cusbo naxaas ah, koloriin naxaas ah ayaa lagu darayaa xalka milixda si xoog leh loogu dhaliyo daxalka. Heerka daxalkiisu waa qiyaastii 8 jeer kii tijaabada NSS.
D. Imtixaanka buufin ee cusbada lagu kala buufiyo waa qiimeyn dhameystiran oo lagu buufiyo milixda. Waxay ka kooban tahay tijaabo buufin milix dhexdhexaad ah qolka baaritaanka daxalka lagu buufiyo milixda oo lagu daray baaritaanka kuleylka qoyan ee joogtada ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa noocyada daloolka-noocyada dhameystiran. Natiijada jawiga qoyan ee la abuuray inta lagu jiro baaritaanka, buufinta milixda ayaa awood u leh inay dhex gasho dusha sare ee lakabyada qotada dheer ee sheyga. Ujeeddada laga leeyahay in loo kala beddelo labada bey'adood ee wax lagu tijaabiyo (buufiska milixda iyo kuleylka qoyan) waa in la hagaajiyo saxnaanta uu qofku ugu xukumi karo guryaha korantada iyo farsamada alaab kasta oo la siinayo.
Tijaabadayada buufinta milixda waxay ku saleysan tahay heerka GJB548B, habka 1009, iyo astaamaha aasaasiga u ah waa: isku-uruurinta xalka milixda waa inay ahaataa 0.5% ~ 3.0% (boqolkiiba miisaan ahaan) biyaha la gooyay ama biyaha la sifeeyey. Milixda la isticmaalay waa inay ahaato sodium chloride. Markaad cabirayso (35 ± 3) ℃, qiimaha pH ee xalka milixda waa inuu ahaadaa inta udhaxeysa 6.5 iyo 7.2. Kaliya kiimikada nadiifka ah ee hydrochloric acid ama sodium hydroxide (xal milan) ayaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo pH. Si loo jaangooyo habka daxalka ee deg degga ah ee biyaha badda, dhererka waqtiga iska caabinta ayaa go'aamisa awoodda ay u leedahay inay iska caabbiso daxalka
Iyadoo horumarka ay baakadaha birta wareega ee isku dhafan, Qiimaynta la qabsiga deegaanka ee u dhiganta ayaa noqotay mid dhammaystiran oo dhammaystiran. Tijaabada daxalka ku buufinta milixda ayaa ah habka ugu weyn ee lagu qiimeeyo u adkeysiga bey'ada ee alaabada. Sidaa darteed, hagaajinta caabbinta waxyeellada ee baakadaha birta ah waxay noqotay arrin muhiim u ah geeddi-soo-saarka. Iyada oo loo marayo cilmi-baaris farsamo, shirkadeena waxay ku dadaalaysaa inay xalliso arrinta daxalka iyada oo loo marayo habka daaweynta kuleylka, habka xiritaanka heerkulka sare, habka korantada iyo habab kale oo lagu farsameeyo qalabka birta. Sidan ayaan si wax ku ool ah ugu hagaajin karnaa guud ahaan iska caabbinta dahaarka xirmada biraha oo aan la kulannaa baahiyaha macaamiisha ay u adeegsadaan noocyada alaabtan.